जोखेर खसी बोका बेच्दा करिब २ करोड ३१ लाख रकम फाइदा:: Naya Nepal
जोखेर खसी बोका बेच्दा करिब २ करोड ३१ लाख रकम फाइदा
रौतहट । हिजो आज रौतहटका किसानहरु हचुवामा भन्दा जोखेर खसी बोका बेच्न थालेका छन् । जोखेर खसी बोका बेच्दा किसानलाई फाइदा हुन थालेपछि किसानहरुले सामुहिक रुपमा जोखेर बेच्न थालेका हुन् । गत बर्षको दशैमा रौतहटमा रहेका केही सहकारी संस्थाहरुले सामुहिक रुपमा बजार राखेर खसी बोका बेच्न थालेका हुन् । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा हेफर इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा र सोडेक नेपालको आयोजनामा भएको परियोजना अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो ।
गत बर्ष ९ हजार २ सय ५८ वटा खसी बोका सहकारी मार्फत बिक्री गर्दा २ करोड ३१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ ठगिनबाट जोगिएको सो सोडेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक निर्मला सुबेदीले जानकारी दिएकी छिन् । सोडेक नेपालले काम गरेको कार्यक्षेत्रको करिब १ हजार १ सय २८ घरधुरीका किसानहरुले फाइदा लिएको कार्यक्रम संयोजक सुबेदीले बताइन् ।
भोकालाइ एक छाक भोजन हैन जिउने जुक्ती सिकाउ, पशुबस्तुको मुल्य श्रृखलामा आधारित साना किसानहरुको संस्था सबलिकरण परियोजना अन्र्तरगत हेफर इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा र सोडेक नेपालको आयोजनामा रौतहटको चन्द्रपुर, गुजरा र गढीमाई नगरपालिकामा कार्यक्रम संचालन रहेको सोडेक नेपालको अध्यक्ष रामपुकार यादबले जानकारी दिएका छन् ।
चन्द्रपुर नगरपालिका वाड नंं २ मा रहेको परिश्रमी सामुदायिक उपभोक्ता महिला कृषि सहकारी संस्था, वडा नं. ३ मा रहेको पुर्ण सहभागिता सामुदायिक उपभोक्ता महिला कृषि सहकारी संस्था र वडा नं. ८ मा रहेको सन्तपुर सामुदायिक उपभोक्ता महिला कृषि सहकारी संस्थालाइ सोडेक नेपालले प्राबिधिक सहयोग गदै आएको छ ।
यसैगरी गुजरा नगरपालिकाको आरम्भ सामुदायिक उपभोक्ता महिला कृषि सहकारी संस्था र धु्रबतारा सामुदायिक उपभोक्ता महिला कृषि सहकारी संस्थालाइ पनि प्राबिधिक सहयोग गदै आएको अध्यक्ष यादबले जानकारी दिएका छन् । उक्त संस्थाले शुक्रबार चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकामा परियोजना अनुगमन तथा समन्वय समितिको अर्ध बार्षिक समिक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ ।
चन्द्रनिगाहपुरमा आयोजित बैठकमा चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले किसानहरुको आर्थिक बिकाशको लागी सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । बैठकमा हेफर इन्टरनेशनल क्षेत्रिय कार्यालय इटहरीका प्रबन्धक दिपेश पोखरेलले किसानहरुलाई ब्यबसायिकता तर्फ उन्मुख गराउन नगरपालिकाको प्रमु्ख हात रहने बताएका छन् । बैठकमा उप प्रमुख रामरती चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सिग्देल, पशु शाखा प्रमुख खडक मैनाली, कृषि शाखा प्रमुख उमेश चौधरी, बरिष्ठ आलेप अधिकृत कृति सुबेदी, वडा अध्यक्षहरु, बिभिन्न समितिका संयोजकहरु तथा बिभिन्न सामुदायिक उपभोक्ता महिला कृषि सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैगरी गुजरा नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा गुजरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तलाल चौधरीले किसानको मर्मलाई नगरपालिकाले बुझेको बताएका छन् । सो कार्यक्रममा नगर उप प्रमुख रौशन खातुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्देश्वर चौधरी, हेफर इन्टरनेशनलका प्रबन्धक दिपेश चौधरी, वडा अध्यक्षहरु, बिभिन्न शाखाका प्रमुखहरुलगायतको सहभागिता रहेको थियो । दुबै कार्यक्रमको संचालन र गतिबिधिबारे सोडेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक निर्मला सुबेदीले जानकारी दिएकी थिइन् । यस बर्ष पनि दशैमा खसी बजार लगाउने ती सहकारी संस्थाहरुका संचालकहरुले जानकारी दिएका छन् ।
रोनाल्डोको घरमा चोरी
एजेन्सी – सुपर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगलको मडेइरास्थित घरमा चोरी भएको छ । शुक्रबार चोरले रोनाल्डोको घरबाट आश्चर्यजनक वस्तु लिन खोजेको बताइएको छ ।
रियल म्याड्रिडका पूर्व स्टारको घरबाट हस्ताक्षर गरिएको युभेन्ट्सको जर्सी र अन्य केहि मुल्यवान बस्तु चोरी भएको उल्लेख गरिएको छ । पोर्चुगिज सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनी घरेलु कामदारले ढोका खोले जस्तै ग्यारेजबाट घर भित्र पसेका थिए । प्रहरीले सिसी टिभिमार्फत चोरको पहिचान भइसकेको बताएको छ । उनले रोनाल्डोका बेसबल टोपी समातेको पनि फुटेजमा देखिएको थियो ।
त्यो त्यहि घर हो जहाँ रोनाल्डो र उनको परिवारले बिदा मनाउने गरेको छ । कोरोना भाइरस कारण इटालियन सिरि ए विश्राम हुँदा रोनाल्डो, उनकी प्रेमिका र ४ बच्चाले त्यहि केहि समय बिताएका थिए ।
सात तलाको उनको घरमा ओलम्पिक आकारका दुई पौडी पोखरी र फुटबल मैदान पनि रहेको बताइएको छ । त्यो घरमा रोनाल्डोका आमा र भाई बस्दै आएका छन् ।
चोरीको समयमा उनीहरु घरमा भए नभएको खुलाइएको छैन । रोनाल्डो स्पेनसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यहि साता स्वदेश फर्केका थिए ।
एसियाली राष्ट्र जापानको टोकियोमा अर्को वर्ष आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकको छनोटको तयारीमा रहेको नेपाली कराते टोलीले पुनः प्रशिक्षण सुरु गरेको छ ।